आन्दोलनरत किसानकाे आरोप : तराईका कृषक भनेर सरकारले भुक्तानीमा चासो दिएन
तराईका किसान भएका कारण सरकारले आफूहरूको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेको उखु किसानले आरोप लगाएका छन् । तराईका मधेसी समुदायका किसान भएका कारण पनि सरकारले आफ्ना समस्यामा चासो नदिँदा पुसको चिसोमा आन्दोलन गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले तराईबाट काम नपाएर काठमाडौंसम्म आन्दोलन गर्न आएको भन्ने सोचेर उखु किसानका समस्याबलाई सामान्य रूपमा लिएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायको आरोप छ । तराईका किसान भोकै मर्दा पनि ओली सरकारले उखुको पैसा भुक्तानी गराउन पहल नगरेको रायले बताए ।
‘आन्दोलनमा तराईका किसान आएका छन् । यिनीहरूको हैसियत कति छ र ? वर्षैपिच्छे काम पाउँदैनन्, आन्दोलन गर्न आउँछन् भन्ने सरकारलाई लागेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले एउटै देशका किसानलाई विभेद गर्‍यो । अरु सबै बालीनाली मासेर उखुखेती गरिरहेका तराईका किसानको मुख्य आयस्रोत यही हो । अब भन्नुहोस्, हामीले परिवार कसरी पाल्ने ? पाँच वर्षदेखि वर्षैपिच्छे भुक्तानी माग गर्दै आन्दोलन गर्नुपरेको छ ।’
मधेसी समुदायका किसान भएका कारण पनि सरकारले भुक्तानीका लागि चासो नदिँदा पुसको चिसोमा आन्दोलन गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । 'सरकारले पहिला भुक्तानी नदिए वार्ता गर्दैनौँ, अब यतै मर्ने हो । बाँकी पैसा नलिई घर फर्किँदैनौँ,' उनी भन्छन् । बैंकबाट ऋण लिएर उखुखेती गरेका कृषकले पैसा तिर्न नसकेको र कतिपय त उखुखेतीका लागि लिएकाे ऋण तिर्नैका लागि काम गर्न भारत पलायन भएकाे अध्यक्ष राय बताउँछन् ।
यस्तै, सर्लाही सिसौटियाका ७४ वर्षीय राजेन्द्र मण्डललाई पनि सरकारले तराईका किसान भनेर पाँच वर्षदेखि उखुको भुक्तानी चिनी मिललाई तिराउन आलटाल गरिरहेको जस्ताे लागेको छ । सरकारले चाहे एकै दिनमा उखुको बाँकी पैसा किसानलाई भुक्तानी गराउन सक्ने उनी बताउँछन् ।
‘सर्लाहीदेखि काठमाडौंसम्म भोकै आन्दोलन गर्न आउने रहर थिएन । चिनी मिलले बाँकी रहेको पैसा दिएको भए यो मर्ने उमेरमा आन्दोलन गर्न किन आइन्थ्यो ? बाँच्नका लागि खेती गरिन्छ । किसानका समस्या सरकारले बुझ्दैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई मधेसका मान्छे मन पर्दैन । हामी तराईका दुःखी किसान हौँ । भोक, रोग, खान नपाएर, बाढीपोहिरो र चिसोले वर्षैपिच्छे मर्छौँ । यस्ता तराईका किसान आएर आन्दोलन गर्छन् भनेर सरकारले सामान्य रूपमा लियाे ।’
सरकारले विचौलियाको आरोप लगाउँदा अति मन दुखेको मण्डलको गुनासो छ । कति किसानले समयमा उखुको भुक्तानी नपाउँदा छोराछोरी पढाउनसमेत नपाएकाे मण्डलको भनाइ छ । उखुको भुक्तानी नै नपाई मरिने हो कि भन्ने डर लाग्न थालेको मण्डल सुनाउँछन् ।
सरकारले एक वर्षअघि गरेको भुत्तानीसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उखु किसान पाँच दिनदेखि आन्दोलनरत छन् । तराई केही जिल्लाका उखु किसान पाँच वर्षदेखि चिनी मिलले उखु खरिद गरे पनि भुत्तानी नगरेको भन्दै सिंहदरबारकै अगाडि माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेका छन् ।
गत वर्षको १८ पुसमा सरकार, चिनी मिल र उखु किसानबीच एक महिनाभित्र किसानले पाउँन बाँकी रकम भुक्तानी गर्न सम्झौता भए पनि उनीहरूले अहिलेसम्म भुक्तानी पाएका छैनन् । गत वर्ष १८ माघभित्र सबै उखु किसान चिनी मिलले बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।
किसानहरूले चारवटा चिनी मिलबाट ८३ करोड र थप दुई मिल बागमती खाँडसरीबाट ४० लाख र महालक्ष्मी सुगर मिलबाट ६ करोड गरी कुल ८९ करोड ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । तर, उद्योग मन्त्रालयमा चिनी मिल्सले बुझाएको तथ्यांकअनुसार भने ६६ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
उखु किनेको पैसा वर्षौँदेखि किसानलाई भुक्तानी नगर्ने चिनी मिलका सञ्चालकलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले सम्बन्धित जिल्लाका सीडीओलाई आदेशसमेत गरिसकेको छ ।
तराईका २० वटा जिल्लाका करिब ८० हजार घरपरिवार उखु खेतीमा निर्भर रहेको सरकारी तथ्यांकमा छ । उखुखेतीमा निर्भर रहेको परिवारले चिनी मिलले समयमा पैसा भुक्तानी नपाउँदा परिवार पाल्न समस्या भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस २, २०७७, १०:२३:००